Ahoana no hampijanonana ny maha-tsy salama anao: toro-hevitra mahomby 11 - Blog
Ahoana no hampijanonana ny maha-tsy salama anao: toro-hevitra mahomby 11
Naivety dia tsy foto-kevitra raikitra. Izay mety ho toa tsy fahaizan'ny olona sasany, mety ho toa hatsaram-panahy amin'ny hafa, na fanantenana, finoana tsara, ary tsy fananan-tsiny, ankoatry ny zavatra hafa.
Saingy mety mahatsapa ianao fa toa tsy dia salama loatra amin'ny fiainana ary manahy fa miteraka olana ho anao izany.
Tsy te ho lasa tsy matoky tena ianao na tsy mino an'izany, fa tsy afaka manohy ny làlanao, satria manimba anao izany.
Angamba ianao malemy paika amin'ny resaka fifandraisana, mino an-jambany foana fa hiasa ny zavatra ary ho raiki-pitia amin'ny filatsahan'ny satroka.
Mety tsy mahay mamaky olon-kafa ianao ary mieritreritra ny tsara indrindra amin'izy ireo foana na inona na inona mitranga.
Angamba ianao mihevitra fa ny zavatra amin'ny fiainana dia tara-masoandro sy avana daholo, rehefa izao tontolo izao, indrisy, dia tsy mandeha toa izany.
Angamba ianao aza dia tratry ny scam tamin'ny taloha.
Na inona izany na inona, ny fahatsoranao dia nahatonga anao olana ary te ho lasa somary matsilo kokoa sy hendry kokoa amin'ny fomban'izao tontolo izao ianao, nefa tsy hahafoana izany fanantenana tsara sy tsy fananan-tsiny anananao izao.
Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy hanampy anao hanao veloma ny mety ho mora volavola sy ho lasa somary clued, nefa tsy ho diso fanantenana.
1. Mieritrereta alohan'ny hitenenana sy ny fihetsikao.
Raha mieritreritra ianao fa ambany saina, ny olanao dia mety hiankina amin'ny tsy fijanonanao sy ny fieritreretanao alohan'ny hitenenanao na hataonao.
Voalazanao ny zavatra voalohany tonga ao an-tsainao na mandeha amin'ny fihetsiky ny lohalikao nefa tsy mandany fotoana handinihana tsara ny toe-javatra.
Noho izany, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mampiadana ny zavatra ary makà fotoana hieritreretana alohan'ny hitenenanao na hanaovana zavatra mihitsy.
Mora kokoa ny milaza azy noho ny vita, ka angamba manomboka indray andro fotsiny.
Andro iray izay anaovanao teboka maka fotoana fohy handinihana sy hijerena ilay olana amin'ny fomba fijery hafa alohan'ny hamalianao amin'ny toe-javatra rehetra.
Dia herinandro. Raha manery ny tenanao hamoaka an'io fotoana io ianao ary hieritreritra aloha, dia ho lasa fihetsika tsy mitombina na ho ela na ho haingana.
2. Aza matahotra mipetraka eo amin'ny fefy.
Ny fefy dia ambany.
Ao amin'ny tontolontsika maoderina, matetika ianao no antenaina haka sisiny amin'ilay teny hoe mandehana, ary raha mipetraka eo amin'ny fefy ianao dia hita fa malemy na tsy mahalala fomba.
Fa ny fefy dia toerana tsara hipetrahana.
Any amin'ny toerana izay ahafahanao manombana ny andaniny sy ny ankilany ary manokana fotoana hampiroboroboana fomba fijery marimaritra iraisana fa tsy maka sisiny manafintohina ary hanenina avy eo.
Makà fotoana handraisana fanapahan-kevitra, ary raha te hijanona eo amin'ny fefy mandrakizay ianao, dia tsara izany.
3. Mitandrema tsara.
Raha toa ianao ka maivamaivana, avy eo ny manamboatra fa mila fanahy inianao manao fitondran-tena amin'ny fahatsapana fa malina loatra ianao.
Ny mitandrina mafy aminao angamba dia ny fomba anatonan'ny olona maro an'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny.
Ity dia zavatra tsy maintsy ataonao amin'ny fahatsiarovan-tena mandritra ny fotoana fohy, fa tsy ho ela dia ho tonga ara-dalàna aminao ny ambim-pitandremana mahazatra.
4. Manatreha bebe kokoa.
Naivety matetika dia mety ho vokatry ny fanananao loha any anaty rahona ary tsy tena mijery ny zava-mitranga eto sy ankehitriny.
Noho izany, manandrama manandrana ny ho eo amin'ny fiainanao isan'andro.
Aza avela ho lanin'ny eritreritrao ianao fa mifantoka amin'izay mitranga manodidina anao sy izay lazain'ny olona aminao.
Hahatsikaritra zavatra mahafinaritra be dia be ianao izay tsy tadiavinao raha tsy izany, fa ianao koa tsy dia ho raisina.
5. Mihainoa tsara.
Ny maha-mpihaino tsara dia toetra mahafinaritra hampiroborobo amin'ny ankapobeny, saingy mety ho fomba tsara koa hianarana bebe kokoa momba ny olona vaovao nefa tsy manome be loatra momba ny tenanao.
rehefa te hiverina aminao ny taloha
Mametraha fanontaniana amin'izy ireo ary asehoy ny tena fahalianana amin'izy ireo, fa tsy maika hizara antsipiriany momba ny fiainanao eo noho eo.
6. Ataovy ny fikarohana.
Ny olona be fahalalana, mahalala dia mety mbola mazava ho azy ihany. Saingy ny fahalalan'izy ireo an'izao tontolo izao dia mahatonga azy ireo tsy dia hanadino zavatra loatra amin'ny zava-bita.
Noho izany, ataovy izay hampianarana anao ny tenanao momba ireo zavatra tsy azonao.
Raha tsinontsinona ianao momba ny olana ara-bola dia vakio ireo zavatra tokony ho fantatrao, na koa mieritrereta hanaraka lalana iray.
Raha tratran'ny fisolokiana ianao na nanana antso akaiky dia ataovy foana ny manamarina zavatra mivantana amin'ny orinasa na andrim-panjakana (raha nanana mailaka avy amin'ny bankinao izay mampiahiahy anao ianao ohatra) alohan'ny hihetsika .
Raha ny olana mahazo anao dia tsy dia misy dikany amin'ny fifandraisana, tadiavo ny psikolojia ao ambadiky ny antony mahatonga ny olona hanao fomba iray.
Isaky ny tsy azonao antoka ny zavatra iray, mandehana ary tadiavo alohan'ny handraisanao fanapahan-kevitra.
Ny fiainana dia lesona iray lava, ary arakaraka ny ianaranao no hahalalanao ny tena zava-misy sy azo ampiharina.
7. Tohizo ny fahatokisanao ny olon-kafa.
Na inona na inona ataonao dia aza manomboka mikapoka ny tenanao amin'ny fanananao toetra matoky. Ny fahatokiana dia zavatra tsara tarehy.
Ny hoe kely saina dia tsy momba ny olona tsy matoky. Ny momba ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra haingana. Ny momba ny fieritreretana tsara ny zavatra sy ny famakiana eo anelanelan'ny tsipika toe-javatra.
Tsy midika izany fa tsy afaka matoky ny olona manodidina anao ianao ary manohy mitady ny tsara ao aminy.
Ny fiheverana fa mendri-pitokisana ny olona iray mandra-panaporofoany fa tsy izany dia tokony ho ny réaction default anao foana, ary tsy midika izany hoe kamboty ianao.
Azo antoka fa betsaka ny olona eto amin'izao tontolo izao misy ratsy ao aminy, fa ny ankamaroan'ny olona dia tena tsara.
8. Fa mianara mamantatra rehefa misy olona manao ny tsy marina.
Raha matetika no voataonan'ireo mpandainga ianao dia mianatra mamantatra izay mahazatra indrindra famantarana izay mandainga ianao .
Ny olona mandainga aminao dia mety ho sahirana amin'ny fifandraisana amin'ny maso, fidget, na fanadiovana matetika ny tendany.
Mety hidika izany fa mitaintaina fotsiny izy ireo, ary ny mpandainga tsy zatra dia mety tsy nanao an'ireto zavatra ireto, fa mbola tsara ny mahafantatra ireo famantarana ireo.
9. Henoy ny tsinainao.
Na dia manjary tsy salama saina ianao, mora kivy, na tsy manan-tsiny, dia matetika misy fahatsapana lalina ao anaty milaza aminao zavatra tsy dia marina.
Raha tokony atosika amin'ny lafiny iray fotsiny ianao dia makà fotoana kely hijerena an'io fahatsapana io ary eritrereto hoe avy aiza izy io.
Aza matahotra ny hamela ny tenanao hitari-dalana ny tsinainao hatrany hatrany. Mety tsy mety foana izany, fa misy antony.
10. Misokatra amin'ny fihaonana amin'ny olona vaovao.
Ny fahalalanao dia mety hidina amin'ny zava-misy niainanao tamina fiainana azo antoka voahodidin'ny olona marobe izay mieritreritra mitovy amin'ny anao.
Raha izany no izy aminao, dia mila misokatra amin'ny fanaovana namana amin'ireo olona tsy mitovy fiaviana na kolontsaina ianao.
Raha tsy miaina anaty vondrom-piarahamonina tena isan-karazany ianao dia mety ho sarotra kokoa izany, fa ny Internet dia mety ho fomba tsara hifangaro amin'ny olona tsy mitovy aminao.
Ary raha mipetraka amin'ny toerana misy kolontsaina marobe miaraka amin'ireo olona avy amin'ny karazan-karena ara-tsosialy sy ara-pinoana samy hafa ianao, dia araraoty tsara izany ary misokatra amin'ny fanaovana namana amin'ireo izay tsy mitovy endrika, tsy miteny, na mieritreritra toa anao.
11. Miala any ary miaina fiainana.
Naivety matetika dia toetran'ny olona tsy ampy amin'ny fiainana. Raha tsy miaina an'izao tontolo izao aloha ianao, dia tsy azo ihodivirana fa ho mora kivy na tsy manan-tsiny ianao.
Ny olona mazàna dia lasa tsy manan-tsiny noho ny fahanterany, fa afaka manome tanana fanampiana ianao amin'ny fitenenana hoe eny amin'ny fiainana fotsiny.
Manandrama zava-baovao, manolora tena an-tsitrapo hanampy ireo tsy dia manan-katao noho ianao, ary hianatra momba ny kolontsaina vaovao.
Ampahafantaro ny tenanao momba ny tantara sy ny zava-misy ary ny tsy rariny eo amin'ny fiarahamonina iainanao, jereo ny zavatra amin'ny fomba fijerin'ny olon-kafa ary raiso fotsiny ny zava-drehetra momba ny fiainana - ny tsara sy ny ratsy.
Hita eo amin'ny fifandraisanareo ve ny fahazavan-tsainao? Tsy azonao antoka ny fomba hampitsaharana ny tsy fahalavorariana? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Fomba 7 tena mandaitra hahamarina ny tenanao
Ahoana ny fomba hanajan'ny olona anao: 7 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t izay mandeha tokoa
Ny torolàlana farany ho an'ny eritreritra fitsikerana
Famantarana 10 an'ny olona tsy atokisana
Ahoana ny fomba hianarana avy amin'ny lesoka nataonao: toro-hevitra 8 tena azo ampiharina!
Ahoana no hijoroanao amin'ny zavatra inoanao: toro-hevitra tena ilaina 5
Maninona ny olona sasany no tia tena? (+ Ahoana no hiatrehana azy ireo)
Ahoana no hijoroanao irery fa tsy ho doka
firy taona i kate beckinsale
inona no dikan'ny hoe mahazo aina amin'ny hoditrao manokana
ahoana no tsy ho sipa sahirana
john cena vady aman-janaka
Famantarana 10 mahomby amin'ny fiainanao
manambady sy tia olon-kafa ny zavatra tokony hatao
ahoana no ahalalana izay tadiaviny